Revision as of 17:14, 15 March 2017 (edit)
Revision as of 17:22, 15 March 2017 (edit) (undo)
:[A scale from "bad" to "good"]
:1. <span style="color:magenta;">Pink</span> <span style="color:grey;">- watermelon, ???, cotton candy</span>
:2. <span style="color:red;">Red</span> <span style="color:grey;">- raspberry, strawberry, cherry</span>
:2. <span style="color:red;">Red</span> <span style="color:grey;">- raspberry, cherry, strawberry</span>
:3. <span style="color:blue;">Blue</span> <span style="color:grey;">- ???, blue raspberry, ???</span>
:4. <span style="color:green;">Green</span> <span style="color:grey;">- lime, mint, pistachio??, watermelon, green apple</span>